I-NYPD yamabhomu eqembu lamabhomu azungeze isakhiwo se-UN phezu 'kwephakheji elisolisayo'
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Iqembu lamabhomu e-NYPD libopha indawo ezungeze isakhiwo se-UN phezu 'kwephakheji elisolisayo'
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTurkey • I-USA Izindaba Ezintsha
Iqembu lamabhomu e-NYPD libopha indawo ezungeze isakhiwo se-UN phezu 'kwephakheji elisolisayo'
Ithimba leqembu le-NYPD libopha izintambo endaweni ezungeze isakhiwo se-UN phezu 'kwephakheji elisolisayo'.
Lesi sakhiwo siyikhaya lezikhungo eziningi zamanxusa aseTurkey eNew York, kufaka phakathi imishini nezithunywa, futhi kubanjwa nemicimbi yamasiko aseTurkey.
Iphakethe elisolisayo latholwa phambi kweNdlu yaseTurkey eNew York City.
I-Turk Evi (iTurkey House) ivulelwe umphakathi kuphela ngenyanga edlule.
Lesi sakhiwo siyikhaya lezikhungo eziningi zamanxusa aseTurkey eNew York.
Umnyango Wamaphoyisa waseNew York (NYPD) iqembu lamabhomu labizwa lapho kutholakala iphasela elisolisayo phambi kweNdlu yaseTurkey eNew York, eduze kwase Isizwe Esibumbenes isakhiwo.
Amaphoyisa abizelwe endaweni yesigameko ngezikhathi zasemini ngezikhathi zendawo.
NYPD iqembu lamabhomu selisuse indawo enamabhulokhi amabili azungeze ibhilidi, elikuFirst Avenue eManhattan.
I-Turk Evi (iTurkey House) ivulelwe umphakathi kuphela ngenyanga edlule. Kutholakala embassy-esindayo e-East Midtown endaweni izizwe Ezihlangene Plaza, ibisakhiwa iminyaka emine.
Kukhona nezindawo zokuhlala eziningi ngaphakathi kwalesi sakhiwo.
Usinde futhi uchume! UNWTO, sekuyisikhathi sokuhlela kabusha ...
Indiza Entsha iSan Jose iya ePalm Springs
Ngabe uke waya endaweni yokuzalwa yeNkosi uBuddha?
UCycas ujabulile ngokungena eSwitzerland
Isinqumo sika-$44 million: U-Hilton uthole ubudedengu esivakasheni...
I-Boeing ixazulula amacala omphakathi angu-MAX kodwa i-FlyersRights...